Ipati yokubhiyozela Usuku lokuzalwa
Besinetheko lokuzalwa elifudumeleyo ebusika obubandayo, ukubhiyozela kunye kunye nokubamba i-BBQ yangaphandle. Intombazana yokuzalwa nayo yafumana imvulophu ebomvu evela kwinkampani.
Intlanganiso yeShawei Digital yeHlabathi yeHlabathi
Ukuqinisa amandla okusebenzisana, inkampani iququzelele kwaye yahlela intlanganiso yemidlalo yehlobo ngeli xesha, imisebenzi eyahlukeneyo yezemidlalo yayilungiselelwe ukukhuphisana neChile ngenjongo yokomeleza ulungelelwaniso, unxibelelwano, ukuncedisana kunye nokwenza umthambo ...
Ukuze usebenze ngcono kubathengi, uqonde iimfuno zabo, i-SHAWEI DIGITAL ihlala ibambe uqeqesho lomsebenzi kwiqela lokuthengisa, ngakumbi iilebhile zezinto ezintsha kunye noqeqesho lomatshini wokuprinta. Ngaphandle kweeklasi ezikwi-Intanethi ezivela kwi-HP Indigo, Avery Dennison kunye neDomino, SW LABEL ikwacwangcisela ukutyelela iprinta ...
Iqela le-BBQ yangaphandle
I-Shawei yedijithali Hlanganisa imisebenzi yangaphandle rhoqo ukuvuza iqela ngeenjongo ezincinci ezincinci Eli liqela elincinci nelinamandla, abantu abancinci bahlala bewuthanda umsebenzi wokuyila kunye nemisebenzi.
SIGN CHINA -MOYU khokela ifomathi enkulu yemidiya
UShawei Digital waya kwi-SIGN CHINA rhoqo kwi-yead, ikakhulu bonisa i- "MOYU", uphawu oluphambili kwintengiso yemithombo yeendaba yokushicilela yefomathi enkulu.
Ilebheli ye-SW isete iintsuku ezimbini zangaphandle zandisa kwaye zalawula lonke iqela e-Hangzhou, ukuba sisebenzise isibindi kunye nokusebenzisana. Ngexesha lokuziqhelanisa, onke amalungu asebenze ngokubambisana ngakumbi. Kwaye yinkcubeko yenkampani-Siyintsapho enkulu kwiqela leShawei!
ILEBHILE YOKUBONISA UMBONISO WOMBONO WELELITI
I-SW LABEL iye kumboniso we-LABEL EXPO, ubukhulu becala ibonisa ZONKE uthotho lweelebheli zedijithali, ukusuka kwi-Memjet, i-Laser, i-HP Indigo ukuya kwi-UV Inkjet. Iimveliso ezinemibala zitsale abathengi abaninzi ukuba bafumane iisampulu.
I-APPP EXPO eShanghai yemithombo yeendaba ye-PVC yasimahla ye-5M
I-SW Digital iye kwi-APPP EXPO eShanghai, ikakhulu ukubonisa ifomathi enkulu yemidiya yokuprinta, ububanzi be-5M. Kwaye kumboniso womboniso kukwakhuthaza izinto ezintsha ze- "PVC SIMAHLA" kwimidiya.
Shawei wedijithali wangaphandle ohambahambayo kwiGreat Angie Forest
Kwihlobo elishushu, inkampani iququzelele onke amalungu eqela ukuba athabathe uhambo lokuya eAnji ukuze athathe inxaxheba kukhenketho lwangaphandle. Kwacwangciswa iipaki zamanzi, iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide, i-barbecues, ukunyuka intaba kunye ne-rafting. Ngelixa sisondela kwindalo kwaye sizonwabisa, sikwa ...
I-DIY Ubushushu yokuDlulisa isiQinisekiso seVinyl
Iimpawu zemveliso: 1) IVinyl yokuncamathela yokusika i-plotter zombini icwebezela kunye ne-matte. 2) uxinzelelo lwesinyibilikisi olubuthathaka unamathela ngokusisigxina. I-3) Iphepha le-Silicon Wood-Pulp Paper e-PE. 4) Ifilimu yekhalenda yePVC. 5) Ukuya kutsho ku-1 unyaka wokuqina. 6) uqine Strong kunye nokumelana kwemozulu. 7) imibala engama-35 + yokukhetha i-8) Ukutshintsha ...
HUAWEI -Uqeqesho lobuchule bokuthengisa
Ukuze kuphuculwe amandla abathengisi, inkampani yethu kutshanje iye kwikhosi yoqeqesho HUAWEI. Umxholo wentengiso ophambili, ulawulo lweqela lenzululwazi masenze kunye namanye amaqela agqwesileyo ukuba afunde amava amaninzi. Ngolu qeqesho, iqela lethu liya kuba ngokugqwesileyo, siya kukhonza e ...
Umva omnyama wangaphandle we-PVC Banner
Amalaphu okutshiza ayahluka ngokwendlela yokusebenza nokusetyenziswa kwayo. Iyakwazi ukwahlula ngobukhulu, ukukhanya kunye nezinto, njl. Intshayelelo yeMveliso Ilaphu elimnyama nelimhlophe likwabizwa ngokuba lilifu elimnyama lebhokisi yelaphu okanye ilaphu elimnyama.Ifudumeza amanqwanqwa aphezulu nangaphantsi eefilimu zePVC ezibunjiweyo, ...